DEG DEG:- Sheekh Mukhtaar Roobow oo isku dhiibay dowladda iyo maamulka Koonfur Galbeed – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Sheekh Mukhtaar Roobow oo isku dhiibay dowladda iyo maamulka Koonfur Galbeed
Warar goordhaw naga soo gaaray deegaanka Abal ee gobolka Bakool ayaa sheegaya in Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur uu isku soo dhiibay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Sheekh Mukhtaar Roobow oo muddooyinkii ugu dambeysay ku sugnaa deegaanka Abal ee gobolka Bakool ayaa halkaasi dagaal xoogan kula galay dagaalyahano ka tirsan Xarakada Al-shabaab oo weerar kusoo qaaday.
Saraakiil ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo goordhaw la hadlay warbaaahinta Bulshoweyn ayaa u xaqiijiyay in Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur uu haatan ku sugan yahay deegaanka Abal, islamarkaana ay la joogaan mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Saacadaha soo socdo ayaa la filayaa in Sheekh Mukhtaar Roobow la keeno degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, halkaas oo uu kula kulmi doono mas’uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Sheekh Mukhtaar Roobow oo hore uga tirsanaa saraakiisha sare ee Xarakada Al-shabaab, ayaa dhawaan waxaa laga saaray liiska argagaxisada ee uu Mareykanka si weyn u doon-doonayo.
Sheekh Mukhtaar Roobow ayaa Al-shabaab isaga baxay, kadib markii uu khilaaf soo kala dhexgalay isaga iyo guddoomiyihii hore ee Al-shabaab Axmed Godane.
Sheekh Mukhtaar ayaa tan iyo sanadkii 2013-ka waxaa uu ku noolaa deegaanka Abal ee gobolka Bakool, halkaas oo ah meesha uu ku dhashay.